Nhau - Kucheka disc & kukuya mavhiri
Kucheka disc & kukuya mavhiri
A: Zvinhu zvekucheka disc:
Kucheka discs kunogona kugoverwa mumarudzi maviri: nebwe nokuveza Disc uye nedhaimani nokuveza Disc. Inogona kushandiswa zvakanyanya kucheka zvakajairika simbi zvigadzirwa, isina simbi simbi & isiri-yesimbi zvinhu.Ukuwedzera, nekuda kwekushanda kwenzvimbo zvinhu zvekucheka nekukorobha, senge simba renyukireya uye magetsi emagetsi uye zvimwe zvinoshandiswa zvinoshandiswa, iyo yekucheka disc inoda kusununguka kwesimbi nesarufa uye nezvimwe zvinhu zvemakemikari kuti zvishande nemazvo. Naizvozvo, kune akakosha ekucheka ma disc emagetsi enyukireya indasitiri, uye iwo anogona zvakare kushandiswa mukucheka kwakasiyana-siyana kwekushandisa kwesimbi kabhoni, simbi isina simbi, alloy simbi, simbi yakakanda nezvimwe simbi:
A: Zvikamu zvekucheka discs
Iyo yekucheka disc inogadzirwa neabrasives, yekubatanidza vamiririri. Hunhu hwekucheka ma discs anonyanya kutemerwa nezvinhu zvakadai sehasha, size size, bonding mumiriri, kuomarara, chimiro uye saizi. Pakati pavo, iyo hasha inowanzo shandiswa se alumina oxide kana dhaimondi, uye chete chikamu chinoshatisa chinonyanya kuvezwa mukucheka nekukuya!
C: Kucheka & kukuya disc maratidziro
The zvinonyatsochengeta nokurondedzerwa ari okurwadzisa Disc uye nokugeda Disc havana zvakawanda zvakasiyana. Nekuda kwemaitiro avo akasiyana ekushandisa, iyo yekugaya disc iri gobvu, zvekuti inogara yakasimba pasi pekukusha mashandiro ezvinhu, asi iyo yekucheka disc inoshandiswa yekucheka kwenguva refu uye haigone kushandiswa sedhizaini, kunze kwekunge iyo yekugaya vhiri yakagadzirirwa nezvose zviri zviviri kucheka nekukuya mabasa, zvikasadaro chero hunhu husingateedzere dhizaini yechigadzirwa pachahwo chine njodzi.
D.Zvimiro zvekucheka discs
Resin yekucheka disc iri nyore kupaza, pamwe yakaparadza workpiece kana kutoita kuti vashandi vakuvadze, saka mush uwane dziviriro yekuvhara kana uchicheka.
TAA alloy yekucheka discs inogadzirwa ne brazing. Mune mamwe mamiriro, dhaimani redhaimani rakasungirirwa kune substrate yesimbi mushure mekunyungudika kwesimbi. Rudzi rwechigadzirwa urwu rune hunhu hwekukuya kwakanyanya, hupenyu hwakareba hwebasa, chengetedzo, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusvibiswa-kusingaiti.Mainly kutsiva yazvino resin bond corundum yekucheka disc, electroplated yekucheka disc, uye imwe inopisa-yakatsindirwa sintered yekucheka disc. Inokodzera kucheka pombi dzakatenderera, simbi dzakaenzana, simbi simbi, maekiseli emakona, chiteshi simbi, I-matanda, uye mamwe ma profiles esimbi, anosanganisira "chaiyo kukanda simbi castings", spheroidal graphite cast ayoni uye akasiyana enguruve simbi.
Kuenzanisa pakati resin discs pamwe nedhaimani chiwanikwa discs: